Nahoana no zava-dehibe ny fanadiovana data ary ny fomba ahafahanao mampihatra ny fizotran'ny fahadiovana sy ny vahaolana | Martech Zone
Talata, Martsa 15, 2022 Talata, Martsa 15, 2022 Zara Ziad
Ny faharatsian'ny kalitaon'ny angon-drakitra dia mampanahy ny mpitarika orinasa maro satria tsy mahafeno ny tanjona nokendrena. Ny ekipan'ny mpandinika angon-drakitra - izay heverina fa hamokatra angon-drakitra azo antoka - mandany ny 80% amin'ny fotoanany amin'ny fanadiovana sy fanomanana angon-drakitra, ary 20% ihany ny fotoana avela hanao ny tena analyse. Misy fiatraikany lehibe amin'ny famokaran'ny ekipa izany satria tsy maintsy manamarina amin'ny tanana ny kalitaon'ny angon-drakitra misy angona maro.
Ny 84% amin'ny CEO dia miahiahy momba ny kalitaon'ny angon-drakitra ifotony amin'ny fanapahan-keviny.
Rehefa avy niatrika olana toy izany ny fikambanana dia mitady fomba manadio sy manara-penitra ny angon-drakitra mandeha ho azy, tsotra ary marina kokoa. Ato amin'ity bilaogy ity, hojerentsika ny sasany amin'ireo hetsika fototra tafiditra amin'ny fanadiovana angon-drakitra, sy ny fomba ahafahanao mampihatra azy ireo.
Inona no atao hoe Data Cleansing?
Ny fanadiovana angon-drakitra dia teny midadasika izay manondro ny fizotran'ny fanaovana data azo ampiasaina amin'ny tanjona rehetra. Izy io dia dingana famahana ny kalitaon'ny angona izay manafoana ny vaovao diso sy tsy mety amin'ny angon-drakitra sy ny soatoavina manara-penitra mba hahazoana fijery tsy miovaova amin'ny loharano samihafa. Ny dingana matetika dia ahitana ireto hetsika manaraka ireto:
Esory ary soloy – Ny saha ao amin'ny angon-drakitra dia matetika misy tarehin-tsoratra mitarika na manenjika na mari-piatoana izay tsy ilaina ary mila soloina na esorina mba hahazoana famakafakana tsara kokoa (toy ny habaka, aotra, tsipika, sns.).
Esory ary atambatra - Indraindray ny saha dia misy singa angon-drakitra mitambatra, ohatra, ny Address saha misy Laharana arabe, Anarana Name Street, fihetseham-po, State, sns. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny saha aggregate dia tsy maintsy asiana tsanganana misaraka, fa ny tsanganana sasany kosa dia tsy maintsy atambatra mba hahazoana fijery tsara kokoa momba ny angona - na zavatra mety amin'ny tranga fampiasanao.
Manova karazana angona - Tafiditra ao anatin'izany ny fanovana ny karazana data amin'ny saha iray, toy ny fanovana Nomeraon-telefaona saha izay nisy teo aloha String ny Number. Izany dia miantoka ny sanda rehetra amin'ny sehatra dia marina sy manan-kery.
Hamarino ny lamina - Ny saha sasany dia tokony hanaraka lamina na endrika mety. Noho izany, ny dingan'ny fanadiovana angon-drakitra dia manaiky ny lamina ankehitriny ary manova azy ireo mba hahazoana antoka fa marina. Ohatra, ny US Phone Number manaraka ny lamina: AAA-BBB-CCCC
Esory ny tabataba – Matetika ny sahan'ny data dia misy teny tsy manome lanja loatra ka noho izany dia mampiditra tabataba. Ohatra, diniho ireto anarana orinasa ireto 'XYZ Inc.', 'XYZ Incorporated', 'XYZ LLC'. Mitovy ny anaran'ny orinasa rehetra fa ny fizotran'ny famakafakana ataonao dia mety hihevitra azy ireo ho miavaka, ary ny fanesorana ny teny toa ny Inc., LLC, ary Incorporated dia afaka manatsara ny fahamarinan'ny famakafakanao.
Ampifanaraho ny angona mba hamantarana dika mitovy - Ny angon-drakitra mazàna dia misy rakitsoratra maromaro ho an'ny orinasa iray ihany. Ny fiovaovana kely amin'ny anaran'ny mpanjifa dia mety hitarika ny ekipanao hanao fidirana maro ao amin'ny angon-drakitra mpanjifanao. Ny angon-drakitra madio sy manara-penitra dia tokony ahitana firaketana tokana - rakitsoratra iray isaky ny orinasa.
Data voarafitra versus Unstructured Data
Ny lafiny iray maoderina amin'ny angona nomerika dia ny tsy mifanaraka amin'ny fampifanarahana amin'ny sehatra isa na sanda ara-tsoratra. Ny angon-drakitra voarafitra dia ny orinasa miasa matetika - hamaroan'isa angon-drakitra voatahiry amin'ny endrika manokana toy ny takelaka na latabatra mba hiasa mora kokoa. Na izany aza, ny orinasa dia miasa miaraka amin'ny angon-drakitra tsy voarafitra hatrany hatrany… izany hatsaran'ny tahirin-kevitra.
Ohatra iray amin'ny angona tsy voarafitra ny fiteny voajanahary avy amin'ny loharano lahatsoratra, feo ary horonan-tsary. Ny iray mahazatra amin'ny marketing dia ny fanangonana ny fihetseham-pon'ny marika avy amin'ny hevitra an-tserasera. Ny safidy kintana dia voarafitra (ohatra. naoty 1 hatramin'ny 5 kintana), fa ny fanehoan-kevitra dia tsy voarafitra ary ny angona momba ny kalitao dia tsy maintsy karakaraina amin'ny alàlan'ny fanodinana fiteny voajanahary (NLP) algorithm mba hamoronana sandan'ny sentiment quantitative.
Ahoana no hiantohana ny angon-drakitra madio?
Ny fomba mahomby indrindra hiantohana ny angon-drakitra madio dia ny fanaraha-maso ny teboka rehetra miditra ao amin'ny sehatra misy anao ary manavao azy ireo amin'ny programa mba hahazoana antoka fa tafiditra tsara ny angona. Izany dia azo atao amin'ny fomba maro:
Mitaky saha - ny fiantohana ny endrika na ny fampidirana dia tsy maintsy mandalo sehatra manokana.
Fampiasana karazana data an-tsaha - manome lisitra voafetra ho an'ny fifantenana, fomba fiteny tsy tapaka mba handrafetana angon-drakitra, ary fitehirizana angon-drakitra amin'ny karazana data mety mba hanerena ny angona amin'ny endrika sy karazana voatahiry.
Fampidirana serivisy antoko fahatelo - ny fampidirana fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo mba hahazoana antoka fa voatahiry araka ny tokony ho izy ny angona, toy ny saha adiresy izay manamarina ny adiresy, dia afaka manome data tsy miovaova sy kalitao.
Fankatoavana - Ny fananana mpanjifanao hanamarina ny nomeraon-telefaonany na ny adiresy mailaka dia afaka miantoka fa voatahiry ny angona marina.
Ny teboka fidirana dia tsy tokony ho endrika fotsiny, fa ny mpampitohy eo amin'ny rafitra rehetra izay mampita angona avy amin'ny rafitra iray mankany amin'ny iray hafa. Matetika ny orinasa dia mampiasa sehatra hanesorana, hanova, ary hampiditra angona (ETL) eo anelanelan'ny rafitra mba hahazoana antoka fa voatahiry ny angona madio. Entanina ny orinasa hanao izany fikarohana angona fanaraha-maso mba hanoratana ny toerana fidirana rehetra, ny fanodinana ary ny fampiasana ireo angona eo ambany fifehezany. Tena ilaina izany mba hiantohana ny fanarahana ny fenitra fiarovana sy ny fitsipika momba ny fiainana manokana ihany koa.
Ahoana ny fanadiovana ny angonao?
Na dia mety ho tsara indrindra aza ny fananana angon-drakitra madio, dia matetika misy ny rafitra lova sy ny fitsipi-pifehezana tsy misy dikany amin'ny fanafarana sy fakana data. Izany dia mahatonga ny fanadiovana data ho ampahany amin'ny ankamaroan'ny hetsika ataon'ny ekipa marketing. Nijery ireo dingana idiran'ny fizotran'ny fanadiovana data izahay. Ireto ny fomba azo atao ahafahan'ny fikambananao mampihatra fanadiovana data:
Safidy 1: Mampiasa fomba fiasa mifototra amin'ny fehezan-dalàna
Python ary R dia fiteny roa fampiasa matetika ampiasaina amin'ny vahaolana kaody hanodinana angona. Ny fanoratana sora-baventy hanadiovana angon-drakitra dia toa mahasoa satria azonao atao ny mampifanaraka ny algorithm araka ny toetoetran'ny angonao, na izany aza, mety ho sarotra ny mitazona ireo script ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ankoatr'izay, ny fanamby lehibe indrindra amin'ity fomba ity dia ny fametahana vahaolana amin'ny ankapobeny izay miasa tsara amin'ny angon-drakitra isan-karazany, fa tsy amin'ny toe-javatra voafaritra manokana.
Safidy 2: Mampiasa fitaovana fampidiran-dresaka
Sehatra maro no manolotra programa na tsy misy code connectors hamindra angona eo amin'ny rafitra amin'ny endrika mety. Mahazo laza ny sehatra automatique naorina mba hahafahan'ny sehatra mitambatra mora kokoa eo amin'ny fitaovan'ny orinasany. Ireo fitaovana ireo matetika dia ahitana dingana voatondro na voalahatra izay azo atao amin'ny fanafarana, fangatahana, na fanoratana angona avy amin'ny rafitra iray mankany amin'ny iray hafa. Ny sehatra sasany, toy ny Fanodinana automatique robotic (RPA) sehatra, afaka miditra angon-drakitra amin'ny efijery mihitsy aza rehefa tsy misy ny fampidirana data.
Safidy 3: Fampiasana Artificial Intelligence
Ny angon-drakitra eran-tany dia tena isan-karazany ary ny fampiharana ny teritery mivantana amin'ny sehatra dia mety hanome valiny tsy marina. Eto no misy ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI) dia mety hanampy tokoa. Ny maodely fanofanana momba ny angona marina, manan-kery ary marina ary avy eo mampiasa ireo maodely voaofana amin'ny firaketana ho avy dia afaka manampy ny tsy fetezana saina, mamantatra ny fahafahana manadio, sns.
Ny sasany amin'ireo dingana azo hatsaraina amin'ny AI mandritra ny fanadiovana data dia voalaza eto ambany:
Famantarana ny tsy mety amin'ny tsanganana.
Famantarana ny fiankinan-doha tsy mety.
Mitadiava rakitsoratra dika mitovy amin'ny alàlan'ny clustering.
Fisafidianana firaketana an-tsoratra mifototra amin'ny mety ho kajy.
Safidy 4: Mampiasa fitaovana momba ny kalitao momba ny angona momba ny serivisy
Ny mpivarotra sasany dia manolotra fiasa isan-karazany momba ny kalitao voafono ho fitaovana, toy ny rindrambaiko manadio data. Mampiasa algorithm mpitarika indostrialy izy ireo ho an'ny profiling, fanadiovana, manara-penitra, mampifanaraka ary manambatra angona amin'ny loharano samihafa. Ny fitaovana toy izany dia afaka miasa toy ny plug-and-play ary mitaky fotoana kely indrindra amin'ny onboarding raha oharina amin'ny fomba hafa.
Ny vokatry ny dingan'ny famakafakana angona dia tsara toy ny kalitaon'ny angona fampidirana. Noho izany antony izany, ny fahatakarana ny olan'ny kalitaon'ny angon-drakitra sy ny fampiharana vahaolana farany amin'ny fanitsiana ireo lesoka ireo dia afaka manampy amin'ny fitazomana ny angon-drakitrao ho madio, manara-penitra ary azo ampiasaina amin'ny tanjona rehetra.
Ny Data Ladder dia manolotra kitapo misy endri-javatra izay manampy anao hanafoana ny soatoavina tsy mifanaraka sy tsy manan-kery, mamorona sy manamarina ny lamina, ary manatratra ny fomba fijery manara-penitra manerana ny loharanon-kevitra rehetra, miantoka ny kalitao avo lenta, ny fahamendrehana ary ny fampiasana.
Tsidiho ny tohatra data raha mila fanazavana fanampiny
Tags: Datafanamarinana angon-drakitraautomatique datafahadiovana datafanadiovana dataserivisy fanadiovana datarindrambaiko manadio datafitrandrahana angonafanafarana datafananganana datatohatra tohatraenta-mavesatradata sciencefanovana datafanovana angonanalainany fomba fanadiovana dataPythondata qualitativedata quantitativefizarana fizarana roboticrpaangon-drakitra voalaminaUnstructured data